SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
AKANGA asiri mupfumi uyezve asina chinzvimbo chepamusoro. Anga asina kana imba yaaiti ndoyakewo. Asi zvaaidzidzisa zvakabatsira mamiriyoni evanhu. Ichokwadi here kuti Jesu Kristu akamborarama panyika? Vaongorori vemazuva ano uye vekare vanotiwo kudii?
Michael Grant, nyanzvi pakuongorora zvinhu zvakaitika kare anoti: “Ongororo dzatinoita dzinoratidza kuti kare kwaiva nevanhu vakawanda vaiva vahedheni uye hapana anozviramba. Saka kana tikaongorora zviri muTestamende Itsva sekuongorora kwatinoita dzimwe nyaya dzakaitika kare, hapana chingaita kuti tirambe kuti Jesu aivako.”
Rudolf Bultmann, purofesa weTestamende Itsva anoti: “Hazvina musoro kufunga kuti Jesu haana kumbovako uye kuzvitaura kupedza nguva. Hapana munhu ane dzakati kwesere angaramba kuti Jesu ndiye akatanga chitendero chekare chevanhu vekuPalestine [kana kuti chevaKristu].”
Will Durant, nyanzvi pakuongorora zvakaitika kare, akanyora kuti: “Chingatova chishamiso chikuru kupfuura zvose zviri mumabhuku eEvhangeri kana munhu akati varume ava [vakanyora Evhangeri] vakangoshandisa njere dzavo kunyora nezvemurume uyu [Jesu] aiita zvinhu zvakanaka uye aikurudzira vanhu kubatana.”
Albert Einstein, nyanzvi yesainzi, akaberekerwa kuGermany asi ari chizvarwa chechiJudha anoti: “Ini ndiri muJudha uye ndinofarira chaizvo zvakaitwa nemurume uyu wekuNazareta.” Paakabvunzwa kuti anotenda here kuti Jesu aivako, akati: ‘Chaizvo! Hakuna munhu angaverenga mabhuku eEvhangeri, otadza kuita seari kutoona Jesu. Nyaya dzirimo hadzisi ngano.’
“Hakuna munhu angaverenga mabhuku eEvhangeri otadza kuita seari kutoona Jesu.”—Albert Einstein
VAONGORORI VEKARE VANOTIWO KUDII?
Zvinhu zvakawanda zvakaitika muupenyu hwaJesu nebasa rake rekuparidza zvakanyorwa muBhaibheri mumabhuku eEvhangeri anoti: Mateu, Mako, Ruka, uye Johani. Uyezve, kunewo mamwe mabhuku ekare asiri echiKristu anotaura nezvake.
(c. 56-120 C.E.) Tacitus ndemumwe wevanhu vekuRoma vairemekedzwa chaizvo pakuongorora zvakaitika kare. Nyaya dzaakanyora dzinotaura nezveUmambo hweRoma kubva muna 14 C.E. kusvika muna 68 C.E. (Jesu akafa muna 33 C.E.) Tacitus akanyora kuti Mambo Nero ndiye akakonzera moto wakaparadza Roma muna 64 C.E. Asi Nero akapomera vaKristu kuti azvichenure. Tacitus akazoti: ‘Kristu, panova ndipo pakabva zita rekuti vaKristu, akatongerwa rufu nagavhuna Pondiyo Pirato, panguva yaitonga Tibheriyo.’—Annals, XV, 44.
(c. 69–a. 122 C.E.) Mubhuku rake rinonzi Lives of the Caesars, munyori uyu wezvakaitika kare akanyora zvinhu zvaiitika panguva yaitonga madzimambo 11 ekutanga eRoma. Parinotaura nezvekutonga kwaKraudhiyo, rinoti pane nyonga-nyonga yakaitika pakati pevaJudha vaiva muRoma iyo ingangodaro yaikonzerwa nekusiyana kwemafungiro avaiva nawo nezvaJesu. (Mabasa 18:2) Suetonius akanyora kuti: “Sezvo vaJudha vaigara vachivhiringana pamusana paKristu, [Kraudhiyo] akabva avadzinga muRoma.” (The Deified Claudius, XXV, 4) Suetonius aipomera Jesu achiti ndiye akanga ari kukonzera nyonga-nyonga uye izvi zvinoratidza kuti ainyatsoziva kuti Jesu aitovako.
(c. 61-113 C.E.) Munyori uyu wekuRoma, ari zvekare mutongi weBhitiniya (yava kunzi Turkey), akanyora tsamba kuna Trajan Mambo weRoma, achitaura kuti vaKristu vaigara ikoko vangaitwa sei. Pliny akati akaedza kumbomanikidza vaKristu kuti vasiye chitendero chavo, achiuraya vainge varamba. Akati: “Ndakaona zvakakodzera kuregerera vanhu . . . vakakumbira ruregerero kuna vanamwari [venhema], nekuvaremekedza, vakapira waini nezvinhu zvinonhuwirira kumufananidzo wenyu . . . , uye vakazotuka Kristu.”—Pliny—Letters, Book X, XCVI.
(c. 37-100 C.E.) Mupristi uyu wechiJudha, arizve nyanzvi pakuongorora zvakaitika kare, anoti mupristi mukuru wechiJudha ainzi Anasi, akaramba aine simba mune zvematongerwo enyika uye “akaunganidza vatongi veSanihedrini [dare repamusoro rechiJudha] achibva aita kuti Jakobho munin’ina waJesu Kristu aunzwe pamberi pedare.”—Jewish Antiquities, XX, 200.
Zvinyorwa izvi zvavanarabhi vechiJudha, zvekuma200 C.E. kusvika kuma500 C.E. zvinoratidza kuti kunyange vavengi vaJesu vaibvuma kuti ariko. Imwe ndima irimo inoti: ‘Yeshu [Jesu] wekuNazareta akarovererwa musi wePaseka,’ uye nyaya dzezvakaitika kare dzinozvitsigira. (Babylonian Talmud, Sanhedrin 43a, Munich Codex; verenga Johani 19:14-16.) Imwe ndima inoti: “Hatidi kuva nemwana anozvinyadzisa pachena sezvakaitwa nemunhu wekuNazareta”—kureva Jesu.—Babylonian Talmud, Berakoth 17b, mashoko emuzasi, Munich Codex; verenga Ruka 18:37.
Kuratidza kuti zvinhu zvakanyorwa mumabhuku eEvhangeri ndezvechokwadi, patinoverenga nezveupenyu hwaJesu nebasa rake rekuparidza tinoudzwawo mazita evanhu, enzvimbo nenguva yaiitika zvinhu. Somuenzaniso Ruka 3:1, 2, inoratidza gore rakatanga Johani Mubhabhatidzi basa rake. Ndiye akavhurira Jesu nzira pabasa rake rekuparidza.
“Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.”—2 Timoti 3:16
Ruka akanyora kuti: “Mugore rechigumi nemashanu rokutonga kwaTibheriyo Kesari, Pondiyo Pirato paakanga ari gavhuna weJudhiya, uye Herodhi ari mutongi woruwa rweGarireya, asi Firipi munun’una wake ari mutongi woruwa rwenyika yeItureya neTrakonitisi, uye Risaniyasi ari mutongi woruwa rweAbhirene, mumazuva omupristi mukuru Anasi neaKayafasi, shoko raMwari rakasvika kuna Johani mwanakomana waZekariya ari murenje.” Mashoko aya anotibatsira kuona kuti “shoko raMwari rakasvika kuna Johani” muna 29 C.E.
Vanhu 7 vanotaurwa naRuka vanotozivikanwa nenyanzvi dzinoongorora zvakaitika kare. Vamwe vaimboramba kuti Pondiyo Pirato naRisaniyasi vanhu vaimbovako. Asi kwakawanikwa zvimwe zvinyorwa zvekare zvine mazita evanhu vaviri ava uye izvi zvinoratidza kuti zvakataurwa naRuka ndezvechokwadi. *
NEI KUZIVA IZVI KUCHIKOSHA?
Jesu akadzidzisa vanhu nezveUmambo hwaMwari, kureva hurumende ichatonga pasi rose
Kuziva kuti Jesu aivako here kunokosha nekuti zvaakadzidzisa zvinokosha. Somuenzaniso, Jesu akadzidzisa vanhu kuti zvii zvavangaita kuti vafare uye vararame upenyu hune chinangwa. * Akavimbisawo vanhu kuti vachazorarama murugare vasina chekutya, uye vakabatana vachitongwa nehurumende imwe chete inonzi ‘Umambo hwaMwari.’—Ruka 4:43.
Zvakakodzera kuti hurumende iyi inzi “Umambo hwaMwari” nekuti ichange ichiita kuda kwaMwari pasi rose. (Zvakazarurwa 11:15) Jesu akambotaura nezvazvo paakanyengetera achiti: “Baba vedu vari kumatenga, . . . Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika.” (Mateu 6:9, 10) Ndezvipi zvichaitwa neUmambo hwaMwari panyika? Zvimwe zvacho ndeizvi:
Hondo nekurwisana kunenge kusisina.—Pisarema 46:8-11.
Uipi, makaro, neuori kunenge kusisina zvachose uye vanhu vakaipa vanenge vasisiko.—Pisarema 37:10, 11.
Vanhu vachatongwa neUmambo hwaMwari vachanakidzwa nemabasa avanenge vachiita.—Isaya 65:21, 22.
Panyika pachava nezvekudya zvakawanda.—Pisarema 72:16; Isaya 11:9.
Vamwe vanhu vanofunga kuti zviri kutaurwa izvi kurota. Asi kuvimba nezvinotaurwa nevanhu handiko kurota here? Chimbofunga izvi: Kunyange zvazvo nyaya dzedzidzo, sainzi, uye kugadzirwa kwezvinhu dziri kuramba dzichifambira mberi, mamiriyoni evanhu haana kugadzikana uye ari kutyira ramangwana. Uye tinogara tichiona vanhu vachidzvinyirirwa mune zveupfumi, zvematongerwo enyika, nezvechitendero uye kunewo vane makaro neuori. Izvi zvinoratidza pachena kuti vanhu havakwanisi kuzvitonga!—Muparidzi 8:9.
Pane chimwezve chakanakira kuti tiongorore kuti Jesu aivako zvechokwadi here. * Pana 2 VaKorinde 1:19, 20 panoti: “Zvisinei nokuti zvipikirwa zvaMwari zvizhinji sei, izvo zvakava hungu pachishandiswa [Kristu].”
^ ndima 23 Pane chimwe chinyorwa chakawanikwa chine zita ‘remutongi’ anonzi Risaniyasi. (Ruka 3:1) Ruka paakanyora nezvake, Risaniyasi aitonga nzvimbo inonzi Abhirene.
^ ndima 25 Zvimwe zvaidzidziswa naJesu zviri muMharidzo yepaGomo inowanika pana Mateu chitsauko 5 kusvika ku7.
^ ndima 32 Kuti uzive zvakawanda nezvaJesu uye zvaaidzidzisa, enda pawww.jw.org uye tarisa pakanzi ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI > MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA.
Jesu Paakafa​—Akamutswa Zvechokwadi Here?
Sei tichiti nhoroondo dzeEvhangeri dzinotaura chokwadi nezvaJesu?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku MUKAI! Nhamba 5 2016 | Jesu Aivako Zvechokwadi Here?